နားရက်အခါကြီးမှာသာယာရွှင်လန်းကြပါစေ၊Lunar New Yearလပြက်ခဒိန်အရနှစ်သစ်ကူးပွဲတော် – XII | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Education » နားရက်အခါကြီးမှာသာယာရွှင်လန်းကြပါစေ၊Lunar New Yearလပြက်ခဒိန်အရနှစ်သစ်ကူးပွဲတော် – XII
နားရက်အခါကြီးမှာသာယာရွှင်လန်းကြပါစေ၊Lunar New Yearလပြက်ခဒိန်အရနှစ်သစ်ကူးပွဲတော် – XII
Posted by Kyaemon on Feb 18, 2013 in Education, Entertainment, Ethnic Groups, Photography, Society & Lifestyle, Travel |3comments
SongZuyingကမြောင်လူမျိုးစုကဖြစ်ပြီးယင်းမြောင်လူမျိုးစုတို့ကလဲမြန်မာပြည် လာအိုး၊ဗီယက်နမ်တို့ မှာနေထိုင်ကြတာပါ၊
သူမကမြောင်Miaoလူမျိုးစုရဲ့တောသဘာဝ သီချင်းတွေကိုတော်တော်ဖော်ထုတ်၊ကျူးရင့် နိုင်ခဲ့ပြီး၊
သူဆိုတဲ့ ‘နဂါးပုံလိုသင်းဘော”သီချင်းမှာ အနောက်နိုင်ငံသား တူရိယာအဖွဲ့ဝင်တွေက
တုံ့ပြန်ပါဝင်နေတာကြောင့် ပရိသတ်တွေက တဟာဟာနဲ့ “ပွဲကျ” နေကြတာပါ၊
၂၀၁၁ နှစ်သစ်ကူးအခမ်းအနားကြီးမှာSongZuyingက “မိုးကောင်းကင်ပြာ”သီချင်းနဲ့ သီဆိုဖျော်ဖြေနေတာပါ
[EngSub] SONG Zuying – Blue is the Sky [Chinese CCTV Lunar New Year Gala 2011] – YouTube
RomanticChineseSongs 1 year ago
To read English subtitles, click “CC” on the right bottom of the video player until it turns red.
၂၀၀၇ အင်ဂလိပ် နှစ်သစ်ကူး Austria နိုင်ငံVienna မြို့တော် တေးဂီတ ခန်းမဆောင်ကြီးမှာ SongZuying က”နဂါးပုံလိုသင်းဘော”သီချင်းကို သီဆိုဖျော်ဖြေနေတာပါ
Opera – Dragon Boat Tune – sung by Song Zuying – Vienna – YouTube
Opera – Dragon Boat Tune – sung by Song Zuying – Vienna.
In the first month of the lunar new year
I,ayoung girl, am going to pay new year calls
Sparrow and parrot
I have to cross the river
Who can ferry the young girl across the river?
Please hold the rudder
I am getting on your boat
Let us cross the river now
In the spring days of March
I,ayoung girl, am going to see the relatives
Will help you this time as well?
Let us cross the river now.
၂၀၀၈ အင်ဂလိပ် နှစ်သစ်ကူး ကUS Kennedy Centre တေးဂီတ ခန်းမဆောင်ကြီးမှာ SongZuying က”ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ဘဝ”သီချင်းကို သီဆိုဖျော်ဖြေနေတာပါ
Opera – Happy Life – Song Zuying – USA The Kennedy Centre – YouTube
Opera – Happy Life – Song Zuying
USA – The Kennedy Centre
Lyric: Che Xing
Composition: Li Xing
Adapt&Mix: Luo Xinmin
၂၀၁၂ က လန်ဒန်မြို့ရှိAlbert တေးဂီတအနုပညာခန်းမဆောင်မှာ SongZuying ကသီဆိုသွားတာပါ
Prince Albert ဟာ လက်ရှိအင်ဂလိပ်ဘုရင်မရဲ့အဖွား Queen Victoriaဘုရင်မရဲ့ ကြင်ယာတော်ဖြစ်ပြီး၊
၄င်း က ကမကထပြူအားပေး တဲ့ခန်းမဆောင်ဖြစ်မှာပါ
နံမယ်ကြီး မျက်မမြင်အဆိုကျော် Andrea Bocelli နဲ့စန်းဒီယားဆရာကမ်ဘာကျော် Lang Langလန်လန်တို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးသီဆိုကြတာပါ
East Meets West Promo (HD) Royal Albert Hall 2012 – YouTube
Promo for the East Meets West concert, recorded at The Royal Albert Hall in London on 5th June 2012. The concert featured Song Zuying, Lang Lang and Andrea Bocelli with The Royal Philharmonic Orchestra and Chorus.
Song Zuing is so elegant and regal~! A beautiful voice, beautiful costume, she’sagift from the elements.
Song, Zuying finally you represent Mhong/Miao people.
the concert was so beautiful
၂၀၁၃ နှစ်သစ်ကူးပွဲအတွက် US မြို့ကြီးများအနက်၊
New York မြို့မှာ ၂/၁၆/၂၀၁၃ နေ့က သီဆိုခဲ့ပြီး၊ Los Angeles မြို့မှာလဲ ၃/၁/၂၀၁၃ နေ့ကျရင်သီဆိုအုန်းမှာ၊
လက်မှတ် က ဈေးမနဲပါ၊
Song Zuying Tickets | Song Zuying Concert Tickets & Tour Dates | Ticketmaster.com
Ms. Song is one of the most renowned musical artists in China. She has held solo concert performances at international venues such as the Sydney Opera House (2002), the Vienna Golden Hall (2004), the John F. Kennedy Centre for the Performing Arts (2008), and London’s Royal Albert Hall (2012). Ms. Song performedaduet with tenor Plácido Domingo at the closing ceremony of the 2008 Summer Olympics in Beijing. As part of the opening festivities of the 2010 World Expo in Shanghai, China, Song Zuying joined tenor Andrea Bocelli, singer Jay Chou, and concert pianist Lang Lang inaconcert titled Charming China at Shanghai Stadium, in front of an audience of 80,000 people.
665 W. Jefferson Blv
Categories: Art/Culture , Festival/Culture Show , Theatre/Dance
၂၀၀၂ ကထဲက Australia နိုင်ငံSydney မြို့နံမယ်ကြီးOpera House အော်ပရာ ကဇာတ်ရုံမှာသီဆိုခဲ့တာပါ
Song Zuying – Mengjiang Girl 孟姜女 – YouTube
ဇူးရင်လေးအကြောင်းကို သိခွင့်ရလို့ရှဲရှဲပါ
သူ့ ခေါင်းဆောင်းတွေ ဘယက်တွေက ငွေနဲ့လုပ်ထားတာထင်တယ်။
မြန်မာမြောက်ပိုင်းက တရုတ်ဘော်ဒါ တလျောက်မှာ
မြန်မာစစ်တပ်က ကချင် လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကို တိုက်ခိုက်နေစဉ် ဘေဂျင်းကတော့
တရုတ်ဘော်ဒါမှာပဲ အခြေစိုက်တဲ့ “၀” တပ်မတော်ကို အဆင့်မြင့်လက်နက် ကိရိယာတွေ တိတ်တဆိတ်ရောင်းချနေတယ်လို့ လုံခြုံရေးလေ့လာ သုံးသပ်သူတွေ က ပြောဆို လိုက်ပါတယ်။ “၀”တပ်မတော်
ကတော့ မြန်မာပြည်ထဲက လက်နက်ကိုင် တပ်တွေထဲမှာ အကြီးမားဆုံးလည်းဖြစ်သလို
အရှေ့တောင်အာရှ မှာတော့ မူးယစ်ဆေးဝါးမှုတွေနဲ့လည်း အကြီးကျယ်ဆုံး
ပတ်သက်နေတဲ့ အဖွဲ့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ်တွေထဲမှာ မြန်မာစစ်တပ်က ကချင်သူပုန်တွေကို
လေကြောင်းကနေ တနည်း၊ မော်တာတွေပစ်ပြီးတော့ တဖုံ စစ်ဆင်ရေးတွေ
ဆင်နွှဲခဲ့တာကြောင့် မြန်မာ အစိုးရရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်း
လှုပ်ရှားမှုတွေ နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး နိုင်ငံတကာက အာရုံစိုက်လာကြပါတယ်။
ကချင်လက်နက်ကိုင် တပ်မတော် ကေအိုင်အေနဲ့ မြန်မာအစိုးရအကြား ၁၇ နှစ်ကြာ
ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ထားနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ၂၀၁၁ မှာတော့ ပျက်ပြယ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီလို ငြိမ်းချမ်းရေး ပျက်ပြယ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့
ယခုတကြိမ် မြောက်ပိုင်း စစ်ဆင်ရေးကတော့ အကြီးကျယ်ဆုံး စစ်ဆင်ရေးလည်း
ကချင်ပြည်နယ်မှာ တိုက်ပွဲတွေရပ်ဖို့ တရုတ်ကနှိုးဆော်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ဘေဂျင်းကတော့ မြန်မာပြည်က အခြားသော လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့
ယူနိုက်တက် “၀” တပ်မတော်ကို တိတ်တဆိတ် လက်နက် တွေ ရောင်းနေတာပါလို့ လုံခြုံရေးလေ့လာသူတွေက ပြောကြားပါတယ်။
ဗြိတိသျှအခြေစိုက် IHS Jane’s Intelligence Review လို့ခေါ်တဲ့ ကာကွယ်ရေးနဲ့ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေကို စုံစမ်းထောက်လှမ်းပြီး စိစစ်လေ့လာကာ အစီရင်ခံ တင်ပြလေ့ရှိတဲ့ Jane’s Information Group ရဲ့
ဒီဇင်ဘာလ အစီရင်ခံစာမှာတော့ တရုတ်က ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်း ကာကွယ်ရေး
စနစ်တွေ တည်ဆောက်ဖို့အတွက် “၀” တပ်မတော်ကို အဆင့်မြင့် လက်နက်တွေ
ရောင်းချခဲ့တယ်လို့ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီထဲ မှာတော့ လေယဉ်ပစ် အမြောက်တွေ၊
တင့်ကားဖျက်လက်နက်တွေ တပ်ဆင်ထားတဲ့ မော်တော်ယာဉ် အစင်းပေါင်း အနည်းဆုံး ၁၂
စင်းထိ ပါရှိကြောင်း အစီရင်ခံစာက ဆိုပါတယ်။ တင့်ကားဖျက် လက်နက်တွေ
တပ်ဆင်ထားတဲ့ မော်တော်ယဉ်ပုံစံမျိုးကို ပထမဆုံး
ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် လုံခြုံရေးလေ့လာ သုံးသပ်သူနဲ့ IHS Jane’s Intelligence Review ကို
ရေးသားသူ အန်တိုနီ ဒေးဗစ္စကတော့ “ဘေဂျင်းက ၀တွေနဲ့ ဆက်ဆံလာတဲ့ သမိုင်းဝင်၊
ယုံယုံကြည်ကြည် ဆက်ဆံမှု အခြေအနေကို ချိန်ခွင်လျှာညီမျှဖို့
ကြိုးစားနေသလို၊ မြန်မာအာဏာပိုင်တွေနဲ့ အဆက်အဆံကိုလည်း အဲဒီလို ညီမျှဖို့
ကြိုးစားနေတယ်” လို့ ဆိုပါတယ်။
“တရုတ်က သူတို့နယ်နိမိတ်စည်းပေါ်က တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေကို
လစ်လျူရှုလို့ မဖြစ်နိုင်သလို၊ တချိန်တည်းမှာပဲ မြန်မာပြည်က ဗဟိုအစိုးရ
ကိုလည်း လျစ်လျူရှုဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့် တရုတ်က
လက်နက်ပစ္စည်းတွေကို တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့နေတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပြီလား ?
မဆိုနိုင်ပါဘူး။ ဒီလိုမျိုး လက်နက်ပစ္စည်းတွေ ထောက်ပံ့နေတဲ့သူဟာ အစိုးရထဲက
စီနီယာကြီးတွေ အထိ ဖြစ်နေနိုင်တယ်ဆိုတာ သိသာပေမယ့်၊ သူတို့ ဟာ
ငွေရေးကြေးရေးမှာတော့ တိုက်ရိုက် ပါဝင်နေတယ်လို့တော့ ပြောလို့မရဘူး။
ဒီနေရာမှာ သူတို့အနေနဲ့ (စွပ်စွဲလာရင်) ငြင်းနိုင်ဖို့ (ထွက်ပေါက်) အခွင့်
အလမ်းလေးတွေလည်း ထားရမယ်လေ။” ဟု အန်တိုနီ ဒေးဗစ္စက ဆိုပါတယ်။
“၀” လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကတော့ မြန်မာပြည်မှာ အကြီးဆုံး
လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ “၀” တပ်မှာ တပ်သားပေါင်း ၃ သောင်းထိ ရှိနေသလို
အချိန်ပိုင်း တပ်သားတွေလည်း ပါဝင်နေပါတယ်။ တရုတ်ကတော့ သူရဲ့ ၀င်ရောက်
မစွက်ဖက်ရေးပေါ်လစီကြီး ရှိနေပေမယ့် ၀တွေကို အကြီးမားဆုံး၊ တရားမ၀င်
လက်နက်ထောက်ပံ့ပေး နေတယ်လို့ စစ်ရေးလေ့လာ သုံးသပ်သူတွေက ဆိုပါတယ်။
၀တွေကတော့ ၁၉၈၉ ခုနှစ်၊ ဗမာကွန်မြူနစ်ပါတီ အကွဲအပြဲဇတ်လမ်းအပြီး
ထွက်ပေါ်လာတဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေထဲက တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါ တယ်။
ဘေဂျင်းကတော့ ကွန်မြူနစ်တွေကို တိုက် ရိုက်ထောက်ပံ့ခဲ့သလို အသစ်အသစ်သော
သူပုန်အဖွဲ့တွေနဲ့ အဆက်အဆံကိုလည်း တည်တံ့စေခဲ့ ပါတယ်။
၀တွေရဲ့ ဒေသနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဂေါ်ဒွန်က – “တရုတ်ပိုက်ဆံသုံးတယ်၊ တရုတ်
ဆဲလ်ဖုန်းတွေ၊ တရုတ်ပြည်ကလာတဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတွေကို အများဆုံး သုံးမယ်၊
မြို့ဧရိယာမှာ လျှပ်စစ်မီးတွေရနေမယ်၊ တရုတ်အင်တာနက်နဲ့လည်း ချိတ်ဆက်ထားတယ်”
၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာ မြန်မာအစိုးရနဲ့ ၀တွေအကြား အပစ်အခတ်ရပ်ဆဲဖို့
သဘောတူညီချက် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီကနေတဆင့် ၀တွေဟာ ရှမ်းပြည်
အရှေ့မြောက်ပိုင်းက သူတို့နေတဲ့ဒေသကို သူတို့ကိုယ်တိုင်
အုပ်ချုပ်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ သူတို့ဟာ အဲဒီဒေသကြီးကို အာရှရဲ့ အကြီး ဆုံးသော
မီသာဖီတာမင်း ထုတ်လုပ်တဲ့ ဒေသကြီးအဖြစ် အသွင်ပြောင်းပစ်လိုက်တယ်။
အဲဒီဒေသကို မူးယစ်ဆေးဝါးမှုနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အကြီးဆုံးဒေသ ကြီးလို့လည်း
အမေရိကန်ရဲ့ U.S. Drug Enforcement Agency ကတော့ ၂၀၁၁
ခုနှစ်မှာတော့ ထိုင်းနိုင်ငံထုတ် မှုခင်းသတင်းတွေထဲမှာ ၀လက်နက်
ကိုင်ခေါင်းဆောင် Wei Hsueh Kang ကို အလိုချင်ဆုံး သူပုန်(most wanted)
၀တွေကို လက်နက်ရောင်းတဲ့ကိစ္စကလွဲလို့ တရုတ်က နယ်စပ်ဒေသကို
မငြိမ်မသက်ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ ဒေးဗစ္စက ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တရုတ်က လတ်တလော ကချင်မှာလို ဒေသခံတွေနဲ့
စစ်ဆင်ရေးဆင်နွှဲနေသလိုမျိုး မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့ “၀” ဒေသမှာ လာမလုပ်ဖို့၊
၀ဒေသကို စိတ်ကူးထဲတောင် မထည့်ဖို့ သတိပေး လိုက်တာမျိုးပဲဟု ဒေးဗစ္စက
“မြန်မာမြောက်ပိုင်းမှာတော့ တရုတ်က မီးစထိုးပေးတဲ့သူ မဟုတ်ပါဘူး။ “၀”
တွေကို အင်အားဖြည့်တင်းပေးတာက (တရုတ်အနေနဲ့) စစ်ရေးဆိုင်ရာ အကာအကွယ်ကို
အင်အားဖြည့်တင်းလိုက်တာပါပဲ။ ခင်ဗျားက အဲဒါကို ကြိုက်မယ်ဆိုရင်၊
(ဒီလိုမျိုးလည်း တွေးနိုင်ပါတယ်။) အဲဒီဒေသမှာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ လောက်
ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းဖြစ်နေတာကို ဆက်လက်ပြီးတည်တံ့ဖို့ တရုတ်က
လုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်သလို အဲဒီလို ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းဖြစ်နေတာ ကလည်း
တရုတ်အတွက် အကောင်းဘက်ဆောင်ပါတယ်။” ဟု ဒေးဗစ္စက ဆိုပါတယ်။
စစ်တပ်က ဆယ်စုနှစ်များစွာ အုပ်ချုပ်နေတဲ့ကာလမှာ အနောက်နိုင်ငံတွေက
မြန်မာကို ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်၊ အဲဒီအချိန်မှာ တရုတ်က မြန်မာပြည်ရဲ့
အရင်းအမြစ် သယံဇာတတွေအပေါ် အင်အားကြီးစွာ လွှမ်းမိုးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်
ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလိုလားတဲ့ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာ ပိတ်ဆို့မှုတွေ
ပြေလျော့ခဲ့တယ်၊ တရုတ်ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုကိုလည်း ယိမ်းယိုင်စေခဲ့ပါတယ်။
ဒေးဗစ္စကတော့ ၀တွေကို လက်နက်ထောက်ပံ့ခြင်းဟာ တရုတ်အနေနဲ့ သူရဲ့
နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုအဖြစ် တုန့်ပြန် လိုက်ခြင်းဖြစ်
သူက “ကျနော်တို့မှာ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာသတင်းမှမရှိဘူး၊ ဒါပေမယ့်
အချိန်တိုင်းဆိုသလို တရုတ်အစိုးရက ကျနော်တို့ရဲ့ ပြည်တွင်းရေးကို
၀င်ရောက်မစွက် ဖက်ဘူးဆိုတာ ကတိပြုပါတယ်။ ဒီတော့ ကျနော်တို့က သူတို့ရဲ့
ကတိက၀တ်ကို လက်ခံပါတယ်။” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကချင်အရေးသာမက နယ်နိမိတ်အရေး ကိစ္စတွေပါ ဆွေးနွေးဖို့အတွက် တရုတ်က
ယခုလအတွင်း အဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်တွေကို မြန်မာဘက် ကို စေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာ အစိုးရထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာက တရုတ်အနေနဲ့ မြန်မာပြည်တွင်းရေးကို
၀င်ရောက်မစွက်ဖက်ဖို့ သဘောတူကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
Ref: http://www.voanews.com မှ ဆောင်းပါးကို M-Media မှ ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်။